MediaTek na-enye ihe nhazi izizi ya na nkwado maka 5G | Gam akporosis
MediaTek na-egosi 5G SoC ya: Onye nhazi ya kacha ike
MediaTek ekwuputala oge gara aga na ọ chọrọ nwee 5G na nhazi ha na 2020. O yiri ka nke a bụ ihe ga-abịa ntakịrị ntakịrị, n'ihi ụlọ ọrụ nke ndị China ebutela ihe nhazi ọhụrụ ya. Ọ bụ 5G SoC ya, nke izizi nke ika ahụ mechara nweta nkwado gọọmentị. Na mgbakwunye, egosiri ya dịka otu n'ime ndị nrụpụta kachasị ike ma nwee nnukwu ọchịchọ. O nwere ike ịbụ otu ahịa na-eche.
N'oge a egosighi data niile nke ihe nhazi ọhụụ a. Ọ bụ ezie na MediaTek na-ezube a ga-eji ya na ekwentị ndị dị elu na-akwado 5G. Ya mere ika a jiri oke ochicho bia na nke a. Ha ekwenyela na a ga-ebupụta ya n'ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ.
Ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi nke ahụ Ọ ga - abụ na mbido afọ 2020 ka emepụtara ya, ma ọ bụ ekwentị ndị mbụ jiri ya rute. Ya mere amụma ụlọ ọrụ ahụ na nke a ga-emezu. Ọ bụ ezie na ọ na-aga n'ihu igosi igbu oge ọ nwere n'ihe gbasara Qualcomm. Kemgbe ekwentị 5G mbụ, dị ka Galaxy S10 5G, na-ere ere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ ugbu a.
Intel, Mediatek na Qualcomm, ụlọ ọrụ atọ ahụ ga-akwalite netwọk 5G na ngwongwo chipset
Nhazi na 5G sitere na MediaTek
N'ime a MediaTek SoC 5G anyị na-ahụ modem nke anyị nke ụlọ ọrụ. N'oge a, ahọrọla Helio M70, nke gosipụtara ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ. Ọ bụ modem nke na-abịa site na nkwado ọtụtụ ọnọdụ (2G, 3G, 4G na 5G). Na mgbakwunye, ọ nwere ikike iru ọsọ ọsọ nke ihe ruru 4,7 Gbps. Ọ bụ ezie na ọsọ ọsọ kachasị karịa 2,5 Gbps, ọbụlagodi n'ọnọdụ kachasị mma. Dịka ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara, ọ dị njikere maka netwọ na ntanetị na ndị na-abụghị ndị ọzọ.
A na-atụ anya na nhazi a dabere na usoro 7 nanometer FinFet. Na mgbakwunye, ọ ga-enwe ihe owuwu ARM kachasị ọhụrụ, Cortex-A77, nke ewepụtara n’ihu ụbọchị ole na ole gara aga. Yabụ MediaTek bụ ụlọ ọrụ izizi na ahịa iji ha. Ọ na-abịa na Mali G-77 GPU.
Amamịghe echiche ga-abụ ihe dị mkpa na ya. Iji mee nke a, a ọhụrụ amamịghe ije na otu. Emere ya na APU 3.0 nhazi usoro neural na nkwado maka 4K vidiyo na ndekọ na 60 fps. Banyere igwefoto, ọ ga-akwado ese foto ruo 80 MP.
MediaTek chọrọ ka ndị nhazi ya mara ihe karịa
A na-atụ anya na na nkeji nke atọ nke afọ a anyị ga-enwe nkọwa ndị ọzọ banyere nke a MediaTek SoC 5G. Ndị a bụ ụbọchị ụbọchị nyocha mbụ nke mgbawa a ga-amalite. Yabụ ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya na anyị nwere ọtụtụ data gbara ha gburugburu. N'aka nke ọzọ, ruo mgbe mbido ya, anyị ga-echere karịa, ebe ọ bụ na ọ gaghị abụ ruo mbido 2020. N'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịmata ụdị ndị ga-eji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » MediaTek na-egosi 5G SoC ya: Onye nhazi ya kacha ike
Amazon Echo Show 5 rutere Spain na onyinye ngosi dị egwu
Onye OnePlus 7 bịarutere na Spain